Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, James 5
Nepali New Revised Version, James 5
1 धनी मानिस हो! सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्‍टहरूका निम्‍ति रोओ र विलाप गर।
2 तिमीहरूको धन सड़ेको छ, र तिमीहरूका पोशाकहरू कीराले खाएका छन्‌।
3 तिमीहरूका सुनचाँदीमा कस लागेको छ, र त्‍यही कस तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनेछ, र आगोले जस्‍तै तिमीहरूको शरीर खानेछ। तिमीहरूले आखिरी दिनहरूका निम्‍ति धन साँचेका छौ।
4 जुन खेतालाहरूले तिमीहरूका खेतका बाली काटेका छन्‌, तिमीहरूले धोकाबाजी गरेर नदिएको तिनीहरूको ज्‍याला नै कराउँछ, र ती बाली काट्‌नेहरूको पुकारा सेनाहरूका परमप्रभुका कानसम्‍मै पुगेको छ।
5 तिमीहरू यस पृथ्‍वीका सुख-विलास र मोजमज्‍जामा मस्‍त भएर बसेका छौ। बलिका दिनको निम्‍ति तिमीहरूले आफैलाई पुष्‍टाई राखेका छौ।
6 तिमीहरूको विरोध नगर्ने धर्मात्‍मालाई दोषी ठहराएर तिमीहरूले मारेका छौ।
7 यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नहोउञ्‍जेल धैर्य धारण गर। हेर, भूमिको बहुमूल्‍य फसलको आशा राखेर किसानले अगिल्‍लो र पछिल्‍लो वर्षा नहोउञ्‍जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्‍छ।
8 तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर। आफ्‍नो हृदयलाई स्‍थिर गराओ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ।
9 भाइ हो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्रता तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर, न्‍यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्‍छ।
10 भाइ हो, कष्‍ट-भोग र धैर्यको उदाहरण कस्‍तो हुनुपर्ने हो, सो प्रभुको नाउँमा बोल्‍ने अगमवक्ताहरूलाई हेर।
11 हेर, धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्‍यका भन्‍छौं। तिमीहरूले अय्‍यूबको स्‍थिरताको विषयमा सुनेका छौ, र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ, कि प्रभु कस्‍तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्‍छ।
12 मेरा भाइ हो, सबै कुराभन्‍दा पहिले स्‍वर्गको वा पृथ्‍वीको अथवा अरू कुनै कुराको शपथ नखाओ, तर दोषी नठहरिनलाई तिमीहरूको “हो” चाहिँ “हो” र “होइन” चाहिँ “होइन” होस्‌।
13 के तिमीहरूमा कसैले कष्‍ट भोगिरहेछ? त्‍यसले प्रार्थना गरोस्‌। के कोही आनन्‍दित छ? त्‍यसले प्रशंसाको भजन गाओस्‌।
14 के तिमीहरूमध्‍ये कोही बिरामी छ? त्‍यसले मण्‍डलीका एल्‍डरहरूलाई बोलाओस्‌। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्‍यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्‍यसको निम्‍ति प्रार्थना गरून्‌,
15 र विश्‍वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ, र प्रभुले त्‍यसलाई निको पार्नुहुनेछ, र यदि त्‍यसले पाप गरेको छ भने त्‍यसलाई क्षमा हुनेछ।
16 यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कासँग आफ्‍ना-आफ्‍ना पाप स्‍वीकार गर। तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्‍ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्‍छ।
17 एलिया पनि त हामीहरूको जस्‍तै स्‍वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस्‌ भनेर भक्तिसाथ प्रार्थना गरेका थिए, र तीन वर्ष छ महिनासम्‍म पृथ्‍वीमा पानी परेन।
18 तिनले फेरि प्रार्थना गरे, र आकाशबाट वर्षा भयो, र भूमिले उब्‍जनी दियो।
19 मेरा भाइ हो, यदि तिमीहरूमध्‍ये कोही सत्‍यबाट बरालिएर जाँदा कसैले त्‍यसलाई फिराएर ल्‍यायो भने,
20 त्‍यसले जानोस्‌ कि जसले एक जना पापीलाई त्‍यसको कुमार्गबाट फर्काएर ल्‍याउँछ, त्‍यसलाई मृत्‍युबाट बचाउनेछ, र असंख्‍य पापलाई ढाक्‍नेछ।
James4Choose Book & Chapter 1 Peter 1